समाचार Archives - Page2of 287 - Enepal Serofero
देशमा गाली-विदेशमा ताली, भण्डारी वातावरणमैत्री सवारी साधन चढ्ने विश्वकै पहिलो राष्ट्रपति
काठमाडौं । आफ्नो देशमा महंगो गाडी किन्न खोजेको भनेर आलोचित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पोल्याण्डमा सबैको प्रशंसा बटुल्न सफल भइन् । दुई सय राष्ट्र सहभागी संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा आयोजित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २४ औँ सम्मेलनलाई राष्ट्रपति भण्डारीले सम्बोधन गर्दै ‘नेपालले नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनमा विशेष प्रयास गरेको र त्यसको कार्यान्वयन राष्ट्रपतिको कार्यालयबाटै भएको बताइन् ।’ जब राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो सम्बोधन भाषणको क्रममा आफूले पनि विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग गर्न थालेको बताइन्, तब सम्मेलन कक्ष तालीको गड्गडाहटले गुन्जियो । किनभने, त्यहाँ उपस्थित राष्ट्रप्रमुखमध्ये सस्तो विद्युतीय गाडी प्रयोग गर्ने भण्डारी नै सायद पहिलो राष्ट्रप्रमुख थिए । चीनको बीवाईडी कम्पनीका अनुसार अत्याधुनिक सेवा सुविधाका साथै सुरक्षाको दृष्टिले पनि उत्कृष्ट ‘इ–सिक्स’ गाड
मनिका झा/राजकरण महतो जनकपुरधाम : सीताराम विवाह पञ्चमी महोत्सवमा भारतको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ आउने भनिएपछि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । यसका लागि पहिलो पटक अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग समेत गरिएको छ । महोत्सवमा आदित्यनाथ भगवान रामको जन्तीको प्रतिनिधित्व गर्दै जनकपुर आउने भएका हुन् । विवाह पञ्चमीमा लाखौंको संख्यामा श्रद्धालु आउने अपेक्षा गरिएको छ । सुरक्षा व्यवस्थाका लागि ड्रोन क्यामराबाट निगरानी सँगै अत्याधुनिक र्यापिड कम्युनिकेसन सिस्टम (आरसीएस) को समेत प्रयोग गर्न लागेको प्रहरीले जनाएको छ । आरसीएस प्रविधि अहिले नेपाल प्रहरीले प्रयोग गर्ने नयाँ प्रविधिहरुमध्येकै एक हो । यसमा उपयोग गरिने भिडियो सेटले क्यामराको माध्यमबाट सुरक्षा अवस्थाको गतिविधिबारे कन्ट्रोल रुमसम्म जानकारी पुर्याउँछ । सोमबार बारहबिघा रंगभूमि मैदानमा नेपाल प्रहरीले विशेष क्षमता भएको दुुईवटा ड्र
निर्वाचन हारेपनि शाहले यसरी पुरा गरे जनतासँगको बाँचा, ५ करोड नीजि लगानीमा अस्पताल निर्माण
जाजरकोट । राजनीतिमा भन्दा समाजसेवीको रुपमा राम्रो छवी बनाउँन सफल नेपाली काङ्ग्रेस का नेता तथा पुर्वसांसद राजीवविक्रम शाहले निजी लगानीमा अस्पताल निर्माण गरेका छन । शाहले गएको निर्वाचनमा वनमन्त्री शक्ति वस्नेतसँग हार व्यहोरेका थिए । उनले जाजरकोट छेडागाड ५ बडावनमा २५ शैयाको अस्पताल बनाएका छन् । ५ करोड रुपैयाँ लागतमा एक वर्षअघि निर्माण थालिएको अस्पताल अब सञ्चालनको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । जाजरकोटमा उपचार अभावमा जनताको ज्यान गरेका घटनाहरु नयाँ होईनन । राजनीतिमा लागेको भए पनि शाहले पदको लागि कहिल्लै नलडेको उनी निकटका व्यक्तिहरु बताउँछन । उनले लामो समय विदेशमा विताएका छन, जाजरकोटमा सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा दिने उद्देश्यले व्यक्तिगत लगानीमा अस्पताल बनाएको पूर्वसांसद शाहले बताए। उनले मंसिरभित्र अस्पतालको भौतिक पूर्वाधारका सबै काम सकिने पनि बताएका छन । “कम्तीमा एक जना एमडीजीपी गरेको डाक्टर राखेर सा
उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको घोषणाः निर्मलाको हत्यारा पक्राउ परिसक्यो, छिट्टै सार्वजनिक गर्छौं
२२ मंसिर, काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललेे निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गर्नेहरु पक्राउ परिसकेको दाबी गरेका छन् । तर, राजनीतिक दलको आवरणमा जोगाउन आउने हो कि भन्ने डर लागेको उनले बताए । १० औं मानवअधिकार राष्ट्रिय महाभेलालाई शनिबार ललितपुरमा सम्बोधन गर्दे उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भने, ‘म यति भन्न चाहन्छु, अपराधी पत्ता लागिसकेको छ, नियन्त्रणमा आइसकेको छ । हामी चाँडै विधिसम्वत ढंगले सार्वजनिक गर्छौं ।’ तर, सरकारले हत्यारा सार्वजनिक गर्दा राजनीतिको ध्येय बोकेकाहरुले छाता ओढाउन आउने हो कि भन्ने डर रहेको उनले बताए । कार्यक्रममा उपस्थित कांग्रेस नेतृ पुष्पा भुसालको नाम लिँदै नेकपाका नेता समेत रहेका मन्त्री पोखरेलले भने, ‘मलाई एउटा डर लागेको छ, सरकारले त्यसलाई सार्वजनिक गर्दा राजनीचिको धेय बोकेकाहरु छाता ओढाउन आउने हुन् कि भन्ने लागेको छ । पुष्पा जी ख्याल गर्नुह
सञ्चारमन्त्री बास्कोटा एक्सनमा उत्रिए, चिनियाँ ठेकेदारलाई ३२ करोड जरिवाना
२३ मंसिर, काठमाडौं । आठ वर्षसम्म परियोजना ओगटेर काम सम्पन्न नगर्ने चिनियाँ कम्पनी हुवाबेलाई सूचना तथा सञ्चार प्रबिधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले ३२ करोड रुपैयाँ जरिवाना तिराएका छन् । नेपाल टेलिकमको सिडिएमए मोबाइल परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति ६ वर्ष नाघ्दा पनि काम नभएपछि मन्त्री बास्कोटा आफैं अघि सरेर जरिवाना तिराएका हुन् । नेपाल टेलिकमका हाल जारी दशवटै परियोजना ठेकदार कम्पनीको लापरवाही र टेलिकम नेतृत्वको लाचारीका कारण अलपत्र परेको भन्दै मन्त्री आफैं कारवाहीमा उत्रिएका हुन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले फोरजी परियोजना अघि बढाउन आवश्यक सबै निर्णय लिने अधिकार मन्त्रालयलाई दिएपछि बास्कोटा टेलिकम सुधार्न सक्रिय भएका हुन् । हुवाबेले सिडिएमए परियोजना २०११ मा शुरु गरेको थियो । नेपाल टेलिकम र हुवाबेबीचको सम्झौता अनुसार सन् २०१३ भित्रमा सिडिएमए बिस्तारको काम सकिनुपर्ने थियो । तर, सन्
आफु बच्न चोर चोर भन्दा २ घण्टा सम्म कुटिएका निदोर्ष युवाको भिडले नै लियो ज्यान
जनकपूरको सिमा नजिकै सितामगढीमा एक युवकको अन्य मानिसहरुको कुटाइबाट ज्यान गएको छ । आइतबार बिहान मोटरसाइकलमा गइरहेका एक युवकलाई घेरेर कुटपिट गरेपछि सिकिस्त भएका युवकको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो । उनलाई २ सय भन्दा बढी मानिसहरुको भिडमा कुेटपिट गरिएको थियो । उनलाई मानिसहरुको भिडमा रहेका केही युवाहरुले बोल्न र हलचल गर्न नसक्ने हुँदा सम्म कुटेका थिए । युवकले भिडमा रुदै कराउँदै आफु चोर नरहेको भन्दै हार गुहार गरेर आफ्नो नाम ठेगाना भन्दा पनि उनलाई कुटपिट गर्ने भिडले नसुनेनन् । अनन्त उनको त्यहि पिटाएबाट ज्यानै गयो । मृतक युवा सीतामढीका २२ वर्षिय रुपेश कुमार झा हुन् । घटना भएको थाहा पाएपछि घटनास्थल पुगेको प्रहरीले उनलाई बचाउनको लागि अस्पतालमा भर्ना गर्यो तर उपचार हुन नसकेपछि रुपेश झा को आइताबार साँझ मृत्यु भएको छ । घटनाका बेला रुपेशको बाइकमा अन्य २ जना साथी पनि रहेको र उनको २ जना साथी मध्ये प
यस्तो त कसैलाई नी नहोस ! १३ वर्षकी बालिका गर्भवति, यसरी फकाएर भएछ वलात्कार – बल्ल थाहा भयो ,हेर्नुहोस यस्तो कसरी हुन् पुग्यो र किन परिवारले यतिका दिन सम्म थाहा पाएनन ? (भिडियो)
बालिका गर्भवती भएपछि गर्भपतन गराउन अदालतमा परिवारले याचिका दायर गरेको थियो । तर, २८ जुलाईमा सर्वोच्च अदालतले गर्भ ३२ हप्ता भएको कारण त्यसलाई खारेज गरेको थियो । डाक्टरहरुको एउटा प्यानलले अदालतलाई यो चरणमा गर्भपतन गराउन बालिका र ‘स्वास्थ्य रहेको’ भ्रुणका लागि ‘निकै जोखिम’ भएको सल्लाह दिएको थियो । त्यही आधारमा अदालतले आफ्नो फैसला सुनाएको थियो । अदालतको यो आदेश परिवारका लागि भने निराशाजनक थियो । उनीहरुलाई ठूलो आशा थियो कि अदालतले गर्भपतनको आदेश दिनेछ । यसबाट १० वर्षकी यी बालिकाको मुद्दाले अहिले चन्दीगढमा मात्र नभएर पूरै भारतमा चर्चाको विषय बनेको छ । चन्दीगढ स्टेट लिगल सर्विसेज अथोरिटीका सदस्य सचिव महावीर सिंहले भने, ‘हामीले १४–१५ वर्षमा गर्भवती भएको कयौँ मामिला देखेका थियौँ तर १० वर्षकी बालिका गर्भवति भएको पहिलो पटक देखिरहेका छौँ ।’ भारतको कानून अनुसार गर्भवती भएको २० हप्तापछि गर्भपतन
६ छोरीका पिता एकनाथलाई ‘प्रधानमन्त्री’ बनाउने प्रार्थना
२१ मंसिर, काठमाडौं । के कुनै पावरमा नरहेको एक व्यक्तिले सिंगो राज्यसत्तालाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्ने क्षमता राख्छ ? राख्दोरहेछ । नेपालमा अहिले यस्तै भएको छ । राष्ट्रिय पार्टीको मान्यतासमेत नपाएको परिवार दलका अध्यक्ष तथा युनिभर्सल पिस फेडरेसन (युपीएफ) नामक एनजीओका नेपाल प्रमुख एकनाथ ढकालले विगतदेखि नै राज्यसत्तालाई परिचालन गरेर आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्दै आएका छन् । ‘एसिया प्याफिक समिट’ का नाममा उनले हालै गरेको कार्यक्रम यसको पछिल्लो कडी हो । एसिया प्यासिफिक समिटको ‘अपार सफलता’ पछि अब एकनाथ ढकाललाई नेपालको प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपति बनाउने प्रार्थना कोरिया र जापानमा युनिफिकेसन चर्चका अनुयायीहरुले सुरु गरेका छन् । नेपालमा आलोचना, ‘हेडक्वार्टर’मा हाईहाई नेपालमा जति विवादित भए पनि यो कार्यक्रपछि यूपीएफको हेर्डक्वाटरमा एकनाथको हाईहाई भएको छ । उनले गत ३ डिसेम्बरमा भिक्ट्री डे (व
काठमाडौंमा नियमित चल्न थाले सडक विभागका ब्रुमर
२१ मंसिर, काठमाडौं । सडक विभागले काठमाडौंमा नियमित ब्रुमर चलाउन सुरु गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि सडक विभागले विहान र बेलुका सडकमा नियमित रुपमा ब्रुमर लगाउन सुरु गरेको हो । सडक विभागमा महानिर्देशक रवीन्द्र श्रेष्ठले काठमाडौंका सडक विभाग मातहतका सडकमा ब्रुमर लगाउने काम नियमित गरिएको बताए । उनले काठमाडौंका मुख्य सडकलाई नियमित रुपमा सफा र धुलोरहित बनाउने योजनाका साथ काम थालिएको बताए । ‘साँझ र विहान हाम्रा ब्रुमरले सडक सफा गर्दैछन्,’ उनले भने,’काठमाडौंका सडक पहिलेजस्तो धुलोमय छैन ।’ यसअघि सडक विभागका ब्रुमरहरु भीआईपीहरुको आगमनमा मात्रै सडक सफा गर्न प्रयोग गरिन्थ्यो । अब भने ती ब्रुमरहरु नियमित रुपमा चलाउन थालिएको विभागले जनाएको छ । यस्तै सडकका खाल्डा पुपर्ने र नाली सफा गर्ने काममा पनि विभागले तत्परता देखाएर काम थालेको श्रेष्ठले बताए । श्रेष्ठले नागढुंगा-कलंकी र
‘सारेगमप’बाट बाहिरिइन् मेनुका पौडेल
चर्चित भारतीय गायन रियालिटी शो ‘सारेगमप’ बाट नेपालकी प्रतियोगी मेनुका पौडेल बाहिरिएकी छन् । टप ११ को प्रतिस्पर्धामा कम भोट पाएपछि उनी आउट भएकी हुन् । उक्त रियालिटी शोका जजहरुले मेनुकाको निकै प्रशंसा गर्ने गरेका थिए । अडिसनमा उनले ‘जाने क्या बात है’ गाउँदा जजहरुले ‘तिम्रो मूल्यांकन गर्ने हाम्रो औकात छैन’ सम्म भनेका थिए । उनले हरेक प्रस्तुतिहरुमा उच्च स्कोरसहित स्ट्यान्डिङ अभेसन पाउँदै आएकी थिइन् । तर मेनुकाको यात्रा लामो हुन सकेन । गत शनिबार प्रशारित पछिल्लो एपिसोडमा आफ्नो छैंटौं प्रस्तुति दिएकी मेनुकाले कम स्कोर ल्याइन् । उक्त एपिसोडमा ‘सारेगामप लिटल च्याम्प’ का विजेता श्रेयान भट्टाचार्यसँग युगल गाएकी मेनुकालाई जजहरुले ८८.७ प्रतिशत स्कोर दिए । जज वाजिद खानले मेनुकाको प्रस्तुति सुन्दर भए पनि म्याजिकल नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । यस एपिसोडसँगै प्रतियोगितामा उनको यात्रा टुंगियो । उनी आ
के हस्तमैथुन साच्चैकै स्वास्थ्यका लागि गलत हो ? (हेर्नुस पुरा विवरण सहित)
राति ढिलोसम्म नसुत्नेमा यस्ता ५ डरलाग्दा रोगको खतरा
यसकारण हरेक दिन पेन्टी फेर्नुपर्छ” नत्र हुन् सक्छ अनेक सङ्क्रमण
कसरी स्वस्थ्य रहने ? बिना औषधी, बिना उपचार
बजारमा आइपुग्यो शाकाहारी कण्डम, केके छ फाइदा ?
बिहान उठ्ने बित्तिकै गर्नुहोस यि सात (७) काम, हुन्छ फलीफाप…
बिहानै नाग देवताको दर्शन गर्नुहोस र जान्नु होस सपनामा सर्प देखियो भने के हुन्छ ?
पतिपत्नी बीच जति धेरै झगडा, उति धेरै माया ! धेरै झगडा गर्ने जोडीको सम्वन्ध दिगो हुन्छ : अध्ययन
विदेशमा रहेका श्रीमानसंग सेक्स भिडियो कल गर्दै धादिंगकी १८ बर्षिय युवती.लिक भएको क्लिप (14,676)
मगर्नी भाउजूको कथा (11,594)
वाइन पिउँदै भाउजु संग बितायाको त्यो रात (11,069)
राजधानीमा अचम्मको बलात्कार – सुन्दा तपाइको होस् उड्छ! (9,925)
जात अनुसार नाक आँखा र फेस फरक भएझै के जात अनुसार महिलाको योनी पनि भिन्न भिन्न हुन्छ ? (8,448)
धादिङको मलेखुबाट नाइट बसमा किचकन्या चढेपछी हंगामा (हेर्नुहोस भिडियो) (8,340)
पाथिभरा माता उत्रीए पछि – यसरी बने धामी ‘भिडियो सहित्’
पाकिस्तानले शूरु गर्यो युद्धको तयारी : सबै अन्र्तराष्ट्रिय संस्थालाई देश छोड्न निर्देश, भारत र पश्चिमाको उड्यो होस !
हेर्नुहोस् पुनर्जन्म पाएकी जलजलाको सबैलाई रुवाउने गीत (भिडियो सहित)
अन्तरास्ट्रिय समाचार (310)
रोचक खबर (2,789)
स्वास्थ्य/जीबन शैली (339)
© Copyright 2016–2018 Enepal Serofero. All rights reserved.